राजगद्दी त्यागेका राजालाई गालीगलौज गरेर गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको असफलता कहिलेसम्म छोप्ने ? कांग्रेस नेता भण्डारी - nepal day
राजगद्दी त्यागेका राजालाई गालीगलौज गरेर गणतान्त्रिक ब्यबस्थाको असफलता कहिलेसम्म छोप्ने ? कांग्रेस नेता भण्डारी
प्रकासन मिति : ६ माघ २०७८, बिहीबार ०७:१४
नेपाल हिन्दू राष्ट्र नभएसम्म राष्ट्रियताको जगेर्ना हुनै सक्दैन
०कांग्रेस महाधिवेशन सकिएको छ । यसले गरेका निर्णय र फैसलालाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
–भनिरहनु परोइन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । यसले पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । कांग्रेसले यस पटकको महाधिवेशनमा यसै गरी देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट ग¥यो ।
पूर्ण प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट छानिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो विश्वासले केन्द्रीय सभापतिदेखि पदाधिकारी, सदस्यसम्म चयन गरे । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत गरिएको यो चयनलाई स्वभाविक रूपमा लिनुपर्छ । मैले पनि त्यही ढंगले लिएको छु ।
विगतको कार्यशैली, अभ्यास र अनुभवको आधारमा नेपाली कांग्रेसले ठूलो आकारको केन्द्रीय कार्य समिति बनाउँदै छ । समानुपातिक, समावेशी, वर्गीय प्रतिनिधित्वको आधारमा यसपालि धेरै साथी निर्वाचित हुनु भएको छ । हजुरबुवा पुस्तादेखि नाति पुस्तासम्मको इन्द्रेणी प्रतिनिधित्व वडादेखि केन्द्रसम्म देखिएको छ । यो कांग्रेस महाधिवेशनको निकै सुन्दर पक्ष हो ।
० महाधिवेशन नीतिमाथि आवश्यकता अनुसार केन्द्रित हुन नसकेको हो ?
–यसमा द्विविधा छैन कि राजनीतिक दलको महाधिवेशन नीति तथा कार्यक्रमबारे बहस गर्ने उपयुक्त थलो हो । कांग्रेसमा कैयन् विषयबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो÷छ । तर नीतिमाथि यस पटक छलफल भएनन् । नेतृत्वबारे हामी बढी केन्द्रित भएको सत्य हो ।
० नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आउनुपर्ने पात्र नै आए भन्ने लागेको छ तपाईंलाई ?